Kodi 19 inosvika mune alpha vhezheni uye inoburitsa yayo yekutanga nhau | Linux Vakapindwa muropa
Kodi 19 inosvika mune alpha vhezheni uye inoratidza yayo yekutanga yakasarudzika nhau, senge AV1 rutsigiro
Kupfuura rinopfuura vhiki rapfuura, chirongwa chinogadzira software iyo yakazvarwa senzvimbo yemultimedia yeXBOX (XBMC, XBOX Media Center) yakakanda iyo inotarisirwa kuve yekupedzisira Leia yekugadzirisa kugadzirisa. Mutsamba yavo yekuburitsa ivo vakataura kuti ivo vanga vachitove vachishanda pane inotevera vhezheni, a Kodi 19 yei mukati mevhiki ino ivo vaparura yayo yekutanga alpha vhezheni. Zita rayo rekodhi, chimwe chinhu chaitozivikanwa, chichava "The Matrix."
Nezve iyo iri alpha vhezheni, pane zvinhu zvishoma zvekuchengeta mundangariro: hapana sarudzo yekuyedza pane linux, uye chero munhu afunga kuiisa inofanirwa kuve pachena kuti vari kuzosangana nezvimwe zvipembenene. Iyo purojekiti inoyambira nezve chimwe chinhu, uye izvi zvichave zviripo panguva yekutanga kweiyo yakagadzika vhezheni: ivo vari kuzoita kusvetukira kuPython 3, saka mamwe maaddons, akadai seaya anoenderana nePython 2, achamira kushanda. Izvi zvinogadziriswa nekufamba kwenguva, kana ivo vanogadzira vachigadzirisa avo vanowedzera.
1 Nhau dzinosvika ne Kodi 19 «Matrix»
1.1 Audio / Mumhanzi
1.2 Vhidhiyo uye zvinyorwa zvidiki
1.3 Shanduko mumusoro weEstuary, inotevera nekutadza muKare 19
1.5 Vanopa ruzivo (vanokanganisa)
1.9 Dzakananga shanduko idzo Kodi 19 dzinosanganisira pachikuva
2 Kodi 19 "Matrix" haina zuva rekuburitsa parizvino
Nhau dzinosvika ne Kodi 19 «Matrix»
Audio / Mumhanzi
Yakagadziridzwa manejimendi eCD seti uye akawanda-disc kesi.
Kuwedzera metadata tags.
Kuvandudzwa kwekubata kwemazuva ekuburitsa album.
Mamiriro matsva ekuvhura mimhanzi yekuratidzira / yakazara skrini rewindo otomatiki kana kutamba kwatanga.
Iyo nyowani yeMatrix-yakafuridzirwa mimhanzi visualization yave kuwanikwa kuisa; kutarisirwa kukuru kwakatorwa kuti iite kuti ishande zvakanaka kumasisitimu epasi-ekupedzisira.
Vhidhiyo uye zvinyorwa zvidiki
Caption opacity ikozvino inogona kuchinjwa.
Mutsva wakasviba grey mavara ezasi.
Shanduko mumusoro weEstuary, inotevera nekutadza muKare 19
Kugadzirisazve mimhanzi yekuratidzira / yakazara-skrini hwindo kuti ifanane nemamwe akazara-mawindo windows - inobvumira fanart uye visualizations kuti iratidzwe pasina kupendekera kwemavara.
Kuwedzera multimedia ruzivo mireza yakawedzerwa kune ruzivo chinyorwa chemumhanzi kuratidza hwindo / yakazara skrini.
Iyo default playlist yekutarisa ikozvino inoshandisa yakafarisisa runyorwa rwekutarisa fomati pamwe nesarudzo mune yeparutivi menyu senge mune dzimwe nzvimbo dzeganda.
Chiono chitsva che "Izvozvi Kutamba" chakawedzerwa kumimhanzi yekutamba, ichiratidza midhiya ruzivo rwe chero rwiyo rwakasarudzwa mune yekutamba uye chero rwiyo rwuri kutamba parizvino.
Iyo iOS vhezheni inotsigira vatungamiriri, senge avo veiyo PlayStation uye iyo XBOX.
Vanopa ruzivo (vanokanganisa)
Nyowani Python scrappers yemimhanzi: inowanikwa mune repository seGeneric Album Scrapper uye Generic Artist Scrapper.
Nyowani Python Scrappers yeTV neMamuvhi - Inowanikwa kubva kunzvimbo dzakadai seThe Movie Database Python uye Iyo TVDB (nyowani).
Estuary TV uye redhiyo chiteshi mapoka uye epamhepo skrini majeti.
Boka maneja manejimendi usability kuvandudza.
Channel maneja usability kuvandudza.
Nhungamiro hwindo rekutonga.
Kuvandudzwa kuEstuary PVR yeruzivo dialog.
Iyo 'Chinja kuzere skrini' kurongedza ikozvino inotsigira chiteshi mhando.
Runyorwa rwekuteedzera mamiriro ezvinhu zvinhu zvekurekodha.
Dynamic PVR zvikamu zveEstuary yekumba skrini.
Kugona kuronga chiteshi uye maEPG nenzira yeiyo backend chiteshi.
Inotsigira boka rakanangana chiteshi kuverenga uye sarudzo yekutanga nhamba yeboka munharaunda kubva 1.
Tsigiro yekutanga EPG zvinowaniswa sekurarama.
Inotsigira kuratidza kurekodha saizi uye kugona kugadzirisa navo.
Nyowani, rarama, pekupedzisira uye kuratidzwa kwema EPG, zvakarekodhwa uye nguva.
Tungamira mawindo ekuvandudza mashandiro.
Tsvaga hwindo rekuita mashandiro.
EPG mashandiro uye ndangariro mashandisiro ekugadzirisa.
C ++ API yePVR plugin kuvandudza.
Yakavandudzwa ruzivo nezvechengetedzo zvinorehwa zvekugonesa ekunze nzvimbo.
Wakawedzera chinja chinja kuti utore password yewebhu interface.
Ini ndinoenda ku Python 3.
Kodi ikozvino inosimbisa mavambo eakaiswa ekuwedzera-ons uye kwavo kutsamira. Izvi zvave kuitiswa kudzivirira yechitatu-bato repositori kubva pakunyora isina kuenderana plugin kodhi, yaive chikonzero chemazhinji bug bug mune zvakapfuura.
Dzakananga shanduko idzo Kodi 19 dzinosanganisira pachikuva
Pane mapuratifomu eDarwin (Apple), Chinangwa-C kodhi yatama kubva pamanyorero ekurangarira manejimendi kuenda kuARM.
Yakawedzera basa kuratidza yakazara / yemahara nzvimbo.
Iyo Rogi danda ikozvino inogona kugoverwa uchishandisa yemuno yekugovana sheet.
Iyo Kodi GUI haichisiri yakavharidzirwa pane notch zvishandiso.
Iyo yekumisikidza kudzima mamwe ma skrini haichadi kuti iyo app itangezve.
Iye zvino nzira yekupedzisira ye macOS inoshandiswa kuisa iyo app mune yakazara skrini.
Static HDR10 rutsigiro rwemhando dzese dzezvinhu, kana chishandiso chikachitsigira.
Tsigiro yeDynamic Dolby Vision HDR yekushambadzira masevhisi, kana chishandiso ichiitsigira.
Windows Iyo zvakare inotsigira Static HDR10 yemhando dzese dzezvinhu, kana iyo komputa iyo GPU ichitsigira.
Kodi 19 "Matrix" haina zuva rekuburitsa parizvino
Nezve zvese zvataurwa pamusoro, zvirokwazvo vazhinji vedu tinonzwa kudiwa kwekuzviedza, asi, sezvatatsanangura, izvo hazvigoneke nazvino muLinux. Uye nezve kusunungurwa kwakatsiga, chirongwa hachisati chataura chero mazuva, saka isu tinogona chete kumirira uye kuva nemoyo murefu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kodi 19 inosvika mune alpha vhezheni uye inoratidza yayo yekutanga yakasarudzika nhau, senge AV1 rutsigiro
Chero bedzi ichiri isina rutsigiro rweChromecast, haina basa nhasi.
Pindura kuna Nas
Chero bedzi pasina rutsigiro rwevashandisi veChomecast.
Ndine urombo shamwari, kwete tese tinoshandisa google kana zvigadzirwa zvakafanana uye pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekugovana midhiya mafaera kubva kuKodhi kuenda kuTV.
Ini ndinoshandisa Kodi kubvira payakatanga se xbmc uye inogara ichisimbirira kuti ndiyo yakanakisa multimedia sarudzo, ikozvino zvese zviri kuchinja uye masevhisi ari kuchinja munyika ye multimedia.
Mhoroi, ndeapi masvikiro andinogona kuisa ino alpha vhezheni?
Mhoroi, ISIDRO. Kubva Kodi Kodi 18 kusvika Kodi 19 ivo vakagadzirisa iyo Python vhezheni (kubva 2 kusvika 3) uye unofanirwa kungwarira nekuti akawanda maaddons uye vamwe vanomira kushanda. Ndivo vagadziri veaya mawedzero-avo vanofanirwa kuvandudza kuti vaite kuti vashande zvakare. Ini handikwanise kukuudza kuti ndedzipi dzichashanda uye ndedzipi dzisingaite nekuda kwechikonzero ichi, uye nechikonzero chimwe chete ini ndichakuudza kuti usachiisa kana iwe uchida 100% inoshanda Kodi. Zvandinokurudzira uye zvandinotaura muchipositi ndezvekuti iwe unozviisa mumuchina chaiwo (semuGNOME Mabhokisi) uye ita zvese zvakapusa zvaunoda ipapo. Kana zvese zvaunoshandisa zvikashanduka zvikakushandira, unogona kuzviedza muhurongwa hwekushandisa, uchiziva kuti ungangomhanyisa mukusawirirana.
Iwo matsva ekutanga ayo anosvika neyekutanga OS 6 anoratidzwa, senge nyowani typography uye kugadzirisa mune yakasviba modhi